Arday ku Qalinjebisay Xarunta Midawga Afrika
Xarunta Midawga Afrika ee ku taalla Magaalada Addis Ababa waxaa maanta lagu qabtay xaflad loo qabanayey illaa 270 arday oo ka kala socday qaaradda Afrika oo badankoodu ay barteen Cilmiga Siyaasadda iyo Xidhiidhka Caalamiga ah.
Ardaydan waxaa ku jiray illaa 100 arday oo Soomaali ah oo badankoodu ay ka yimaaddeen xarunta Jaamacadda New Generation ee magaalada Hargeisa, halka ay jireen arday kale oo ka socotay Puntland iyo gobollada kale ee Soomaaliya.
Xafladda Qalinjebinta waxaa ka qaybgalay diplomaasiyiin badan oo Afrikaan ah iyo weliba masuuliyiin uu ka mid yahay Madaxweyne ku Xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici.
Haddaba Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay Cabdicasiis Maxamed Yuusuf oo ah Guddoomiyaha Jaamacadda New Generation ee Faraceeda Hargeisa iyo Naciima Cabdi Axmed oo iyaduna ka mid ahayd ardayda maanta qalinjebisay.
Arday ka Qalinjebisay Midawga Afrika